Gacan-gashi gacmo-gashi dhammaaday oo Shiinaha ah Qiimaha jaban ee jumlada ah ee ugu sarreeya baaritaanka gacmo-gashiga latex medical factory iyo alaab-qeybiyeyaasha. DESAY
Glovesare-ka aan budada lahayn ee la tuuro oo laga sameeyay tayada jilicsan ee jilicsan iyo jilicsanaanta dabiiciga ah. Gacan-gashiyaashan aan budada lahayn waxay siinayaan dabacsanaan aan caadi ahayn, taasoo ka dhigaysa kuwo si fudud wax loogu deeqi karo loona isticmaali karo waqti dheeri ah. Muuqaalka muuqaalka leh wuxuu u fiican yahay qabashada qoyan ama qalalan.
galoofyada aan budada lahayn waxay bixiyaan ilaalin dareeraha inta lagu jiro howlaha iyo howlaha iyadoo daryeelka caafimaadka iyo adeegayaasha cuntada ay la kulmi karaan khataraha bayooloji ee badanaa lagu qaado dhiiga bini'aadamka, dareeraha jirka, unugyada, cudurada dhiiga qaada iyo tijaabooyinka. Intaa waxaa sii dheer, galoofyadayada aan lahayn budada 'Latex' waxay gacan ka geysaneysaa ilaalinta kahortaga xadiga yar ee isticmaalka kiimikada iyo yareynta fiiqista yar. Gacmo gashiyada aan budada lahayn ee 'Allura ™ Latex' waxaa lagu soo saaray difaac adag oo adag oo u hoggaansamaya xeerarka soo socda ee FDA ee daryeelka caafimaadka iyo warshadaha adeegga cuntada.
Alaabtaan waa la tuuri karaa in la tuuro mar haddii la isticmaalo. Maaskarada waa in la beddelaa 4-6 saacadood oo xirnaan joogto ah kadib.
- Fasalka Caafimaadka. Powder-Bilaash
- Ilaalinta Xannibaadda Weyn
- Jirdhiska Sare iyo Dareenka
- Xasaasi Dareen Fiican
- Kabadhka Beaded. Dhererka Curcurka
- Maaddooyin jilicsan oo u sameysma gacmaha
- Raaxo Dheeraad ah Inta Lagu Jiro Nidaamyada Dheer
- Si buuxda Loogu Qoray Qoynta Wanaagsan ama Qallalan
- Ka Adag Talo Gacmo gashi Vinyl
- Waxay u fiican tahay Cilmiga Biyolojiga iyo Biyaha
Waxyaabaha PVC polyvinyl chloride
Fasalka Darajada Warshadaha, Caafimaadka iyo Cuntada
Midab Cad, Cadaan, Buluug, Jaale
Faahfaahinta Budada Bilaash ama Boodh
Miisaanka M4.0 +/- 0.3g M4.5 +/- 0.3g M5.0 +/- 0.3g M5.5 +/- 0.3g
Hore: Koollo biyo-diid ah oo hufan
Xiga: Galoofisyada gacmo gashi ee Nitrile ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Gacmo gashi leh gacmo gashiga NItrile ee tayada sare leh ee la tuuri karo
Kartoo Clear Anti Fogi caaga Me Protective Me ...